ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको ‘ड्रिम फाइनल’ तय – RaptiSandesh
Home / खेलकुद / ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको ‘ड्रिम फाइनल’ तय
गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेज नायक बन्दै ३ पेनाल्टी रोकेपछि अर्जेन्टिनाले कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-२ ले हरायो ।
एउटा रमाइलो संयोग के छ भने ब्राजिलले अहिलेसम्म घरेलु मैदानमा खेलेको सबै कोपाको उपाधि जितेको छ । सन् १९१९, १९२५, १९२९, १९३७ र २०१९ मा आयोजक हुँदा ब्राजिलले उपाधि जितेको थियो । के यसपटक अर्जेन्टिनाले त्यो इतिहास तोड्ला ?
फाइनलमा भने दुवै समूहमा एक/एक टिम छन् । अर्जेन्टिना समूह ‘ए’ को विजेता र ब्राजिल समूह ‘बी’ को विजेता बन्दै फाइनल पुगेका छन् ।
यस पटक मेस्सी गोल्डेन बल र गोल्डेन बुट दुवैको दाबेदारीमा अघि छन् । अर्जेन्टिनाकै लाउटारो मार्टिनेजले ३ गोल गरेका छन् । ब्राजिलका नेयमार र लुका पाक्वेटा तथा अर्जेन्टिनाका अलेजान्द्रो गोमेजले पनि २-२ गोल गरेका छन् ।
उता ब्राजिलले भने आफ्ना तीन गोलकिपरलाई नै खेलाएको छ । भेनेजुएलाविदरुद्ध पहिलो खेल एलिसन बेकरले खेल्दै क्लिनसिट राखे । त्यसपछि पेरुविरुदध एडरसनले खेले र उनले पनि क्लिनसिट राखे । तेस्रो खेलमा कोलम्बियाविरुद्ध वेभरटन खेल्दा ब्राजिलले एक गोल खाएको थियो । चौथो खेलमा फेरि एलसिन बेकर नै खेल । उक्त खेल १-१ को बराबरीमा सकिएको थियो । क्वाटरफाइनलमा चिली र रसेमिफाइनलमा पेरुविरुद्ध एडरसन खेले र उनले दुवै खेलमा क्लिनसिट राखे । एडरसनले ३ खेल खेल्दा तीनवटैमा क्लिनसिट राखेका छन् ।
विरुद्ध चिली १-१ को बराबरी
विरुद्ध उरुग्वे १-० को जित
विरुद्ध पाराग्वे १-० को जित
विरुद्ध बोलिभिया ४-१ को जित
विरुद्ध इक्वेडर ३-० ले विजयी
विरुद्ध कोलम्बिया ३-२ ले विजयी (पेनाल्टी सुटआउट)
विरुद्ध भेनेजुएला ३-० ले विजी
विरुद्ध पेरु ४-० ले विजयी
विरुद्ध कोलम्बिया २-१ ले विजयी
विद्ध इक्वेडर १-१ को बराबरी
विरुद्ध चिली १-० ले विजयी
विरुद्ध पेरु १-० ले विजयी
२३ असार २०७८, बुधबार ०७:२२
Previous: स्वस्थ रहन दैनिक कसरी र कति पानी पिउने ?
Next: सुजिताको मृत्युको कारण पोष्टमार्टममा खुलेन, हत्या कि आत्महत्या ?
कोपा अमेरिकाः मेसी र नेइमार संयुक्त उत्कृष्ट
२८ असार २०७८, सोमबार ०५:५७
५३ वर्षपछि युरोको उपाधि इटलीले जित्‍यो
२८ असार २०७८, सोमबार ०५:२५
ब्राजिलका राष्ट्रपतिको दावी- ब्राजिलले अर्जेन्टिनालाई ५-० हराउँछ
२५ असार २०७८, शुक्रबार १०:५९